Muxuu Pep Guardiola ka yiri guushii weyneyd oo ay Manchester City ka gaartay Wolverhampton? – Gool FM
(Manchester) 03 Maarso 2021. Tababaraha reer Spain iyo kooxda Manchester City ee Pep Guardiola ayaa faallo ka bixiyay guushii weyneyd oo ay kooxdiisa ka gaartay naadiga Wolverhampton.
Manchester City ayaa garoonkeeda Etihad guul weyn kaga gaartay kooxda Wolverhampton, kaddib markii ay kaga adkaatay 4-1, xilli kulankan uu qeyb ka ahaa horyaalka Premier League.
Haddaba kaddib ciyaarta Pep Guardiola ayaa u sheegay warbaahinta:
“Waxaan aheyn kuwa cajiib ah maanta, kaddib barbarihii aan la dhibtoonay inta ay ciyaar socotay, laakiin waxaan abuurnay fursado badan dhamaadka.”
“Waxa kaliya ee aan hadda ka walwalsanahay waa Manchester United, Liverpool waa kooxda heysata tartanka, ilaa iyo haatan horyaalka iyaga ayaa heysta.”
“Waxaan hadda ku jirnaa booska ugu macquulsan waxaana isku dayi doonaa inaan ka qaadno horyaalnimada, laakiin wali iyaga ayaa heysta horyaalnimada.”
“Wali waxaa harsan 33 dhibcood, Manchester United ayaa ciyaari doonta, waxaan heli doonaa maalin ama labo maalin oo nasiino ah, kaddibna waxaan u diyaar garoobi doonnaa kulanka aan kula ciyaareyno United garoonkeena.”
“Waxaan si fiican uga falcelinay barbarihii ciyaarta, waxaana gaarnay guushii aan u qalnay oo si fiican ayaan u ciyaarnay. Kulamadaani waa kuwo adag, daqiiqadaha ugu dambeeya waxaan ugu guuleysaneynaa kulamada si raaxo leh.”